NFC: Nsogbu Nkwukọrịta na Ahịa
Mpaghara ihu igwe na-aga n'ihu, ọ bụ naanị ndị na-ere ahịa na-agbaso mgbanwe ma tinye ha na atụmatụ nkwado ha na itinye aka na-enwe ohere ịga nke ọma na ụwa asọmpi taa.
Teknụzụ kachasị ọhụrụ emegoro ya bụ Near Field Communications (NFC).
Gini bu Near Field Communications?
Near Field Communications bụ teknụzụ agbakwunyere na ngwaọrụ mkpanaka kachasị ọhụrụ na-enye ohere nkwukọrịta echedoro (yana nkwenye) n'etiti ngwaọrụ mkpanaka yana ngwaọrụ nnyefe. NFC na-enye ndị ọbịa ohere ịbanye miri emi karị, iji lelee mgbasa ozi ahaziri iche nke ahaziri iche, nata onyinye pụrụ iche ezubere iche, kesaa ahụmịhe na nke kachasị mkpa, zụta ihe niile site na ekwentị ha.
NFC bụ nnukwu mmelite karịa koodu QR. Koodu QR choro ibudata ngwa na ibudata koodu mmanya iji nweta ihe di omimi kariri ibe weebụ. NFC na-enye ndị ọrụ ekwentị ohere ịnweta ọdịnaya bara ụba ma soro akara ahụ na-emekọ ihe n’enweghị nsogbu. Ihe onye ọ bụla kwesịrị ime bụ ịpị ama ama na mpempe akwụkwọ ọ bụla RFID agbakwunyere, akwụkwọ mgbasa ozi, ebe ire ere ma ọ bụ ihe nkwado ọ bụla, iji nweta ohere ịbanye na ụwa nke ọgaranya na ọdịnaya.
Maka onye na-ere ahịa, nke a apụtaghị naanị ijikọ na iso ndị ọbịa na-emekọrịta ihe nke ọma, kama ọ bụ ohere iji weghara omume na mmasị ndị ọbịa n'oge dị adị n'ezie. Eziokwu ahụ bụ na teknụzụ a na-ejikọ nkwalite na isi nke ire ere, si otú a na-ekwe ka ndị ọbịa nwere mmasị ịzụta ihe n'otu ntabi anya nwere ike ịme nke a dị nsọ nke ndị ahịa na ụbọchị ndị na-abịanụ.
Enwere ike iji teknụzụ NFC maka njirimara, tiketi, oge na ọbịbịa, iguzosi ike n'ihe na mmemme ndị otu, nnweta echekwara (nke anụ ahụ ma ọ bụ site na ngwaọrụ) ma ọ bụ iji ụzọ na-agabiga - na mgbakwunye na nhazi ịkwụ ụgwọ. Dị nnọọ ka anyị na-enyocha ụzọ na ihe omume na ntanetị, ebe a ga-enwe ike inyocha ụzọ na omume na-anọghị n'ịntanetị - ikekwe ịlele ma kwụghachi omume nke ndị ọrụ NFC ha. Thinaire enyeela vidio a nke na-ekwu maka ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ ụlọ ọrụ nwere ike isi nweta teknụzụ:
Google amalitelarị Google gam akporo na ike NFC, ndị ọ bụla ọzọ na-egwu egwu na-agbasoro ma ọ bụ kwupụta ọkwa NFC n'ọdịnihu dị nso.
Ọ bụrụ na ị nwere Google gam akporo nke ahụ bụ NFC nwere ike, gaa na Androidlọ ahịa Android Google. Ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta, Google ewepụtala nkọwa a vidiyo na NFC mmepe.
Budata site na ntaneetị Near Field Communications maka Dummies maka nlezianya anya na NFC. Chọpụta:
Ihe ndị na-azụ ahịa na-achọ taa, ọkachasị ndị nke puku afọ siri ike nghọta
Etu esi arụ ọrụ na ahụmịhe mkpanaka yana mkpọsa ahịa iji nweta ego na ikwesị ntụkwasị obi
Kedu ihe eji eme ihe na-erite uru site na njirimara ngwaahịa dijitalụ na nkwakọ ngwaahịa mara mma
Kedu otu mmezi ziri ezi nwere ike isi meziwanye iguzosi ike n'ihe ma bulie azụmaahịa ekwentị
Etu esi eji ikike ịhazi igwe ojii mee ka ahịa ahịa gbara gburugburu na-erute ndị ahịa ọhụụ ma na-eme ndị ahịa ugbu a obi ụtọ
Otu esi amalite na mkpọsa nke omnichannel gị site na iji NFC dị ka teknụzụ etiti
Budata Nkwukọrịta Ozi Dị Nso maka Dummies
Tags: ohereịgaenweghị egogoogle androidobere akpa googlenjirimarabanyenhazi ịkwụ ụgwọ ekwentịugwo ugwonkà na ụzụ ọgbara ọhụrụna nso nso nkwukọrịtanfcebe ahịanchebe ụzọsecurityugwo amamkpaỊnye tiketioge na ịga